Nkọwapụta --lọ ọrụ - Sebter Auto Accessories Co., Ltd.
Tọrọ ntọala na 2006, ụlọ ọrụ ahụ bụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka ngwa ahịa akụrụngwa na-etinye mmepe, mmepụta, ahịa na ọrụ. Ọ na-elekwasị anya na nyocha na mmepe nke akụrụngwa akụrụngwa. Ọ nwere ihe karịrị ikikere 80. Na 2017, e gosiri ya dị ka mpaghara mpaghara ọkwa teknụzụ ọhụụ. The factory nwetara TUV miri asambodo na 2020.
Ngwaahịa ndị bụ isi bụ ụgbọ ala anwụ, mkpuchi oche, usoro nko ụgbọ ala, ụgbọ ala shọvel ụgbọ ala, enyo anya ụgbọ ala, ndị na-ewepụ ụgbọ ala, ndị na-ejide ụgbọ ala, ụgbọ elu ụgbọ ala, mgbapụta mgbatị taya, ụgbọ ala mmiri, ụgbọ ala ụgbọ ala, Ugbo ala ụgbọ ala. akụrụngwa na nchekwa ụgbọ ala, wdg. Anyị na-enye ngwaahịa na ọrụ karịrị ụlọ ọrụ metụtara 180 automotive. Ebupụla ngwaahịa anyị n'akụkụ niile nke ụwa, gụnyere China, Europe, North America, Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia, Japan na South Korea.
Companylọ ọrụ ahụ na-etinyekarị ọtụtụ ụdị, ọtụtụ ụdị na wdg. Companylọ ọrụ agbaso "ahịa mbụ, mepụta n'ihu" azụmahịa nkà ihe ọmụma, rube isi "ahịa" ụkpụrụ inye ndị ahịa na àgwà ọrụ. Nabata ndị ahịa!
N'ime afọ 15 gara aga, anyị na-enye ndị ahịa ezigbo ngwaahịa na nkwado teknụzụ yana ọrụ mgbe ahịa gachara. Companylọ ọrụ anyị na-ejikarị ahịa nke ihe ọla, ihe owuwu ụlọ, ihe ịchọ mma, ngwaahịa kemịkalụ na akụrụngwa (ewepu ngwongwo dị egwu), ndị na-ete mmanụ, ngwaahịa eletrọnik na ngwa nkwukọrịta, ngwaahịa akwụkwọ, ngwo na ngwaahịa osisi, na ngwaahịa ngwaahịa; na-akwado onwe gị ma na-eme ihe niile ụdị ngwaahịa na teknụzụ ibubata na mbupụ azụmahịa. Anyị nwere ezigbo ngwaahịa na ọkachamara ahịa na teknụzụ ndị ọrụ aka, ụlọ ọrụ anyị bụ nke Wuxi nkwakọ ngwaahịa ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-enweghị ọkwa, ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ọrụ ngwaahịa nke ụlọ ọrụ anyị, lee anya na ozi ịntanetị gị ma ọ bụ kpọọ maka ndụmọdụ
Sebter Auto ngwa Co., Ltd.
Businesszụ ahịa ahụ gụnyere ire ihe igwe, ihe eji arụ ụlọ, ihe ịchọ mma, ngwaahịa kemịkalụ na akụrụngwa, ndị na-ete mmanụ, ngwaahịa elektrọnik na ngwa nkwukọrịta, wdg;
Aha Akara AKWTERKWỌ
Ahụmahụ ụlọ ọrụ Afọ iri na ise
Ọnụ ọgụgụ nke ndị ọrụ R&D 5
Ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ 30
Mpaghara ụlọ ọrụ 1500 mita mita
Ahịa ahịa kwa afọ 2,5 nde dollar
Kpọtụrụ anyị ugbu a!